Xal laga gaaray khilaafkii Shahaadada Ardayda Puntland – Radio Baidoa
Xal laga gaaray khilaafkii Shahaadada Ardayda Puntland
Maalmihii la soo dhaafay waxaa jiray dadaalo ay sameynayeen Xildhibaannada labada Gole ee deegaan doorashadoodu tahay deegaannada Puntland si xal looga gaaro khilaafka dhanka Waxbarashada ah ee ka dhaxeeya Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Maamulka Puntland.
Xildhibaannada ku jiray xalkaas oo Warbaahinta kula hadlayay Maanta Magaalada Muqdisho ayaa waxaa ay sheegeen inay la kulmeen Madaxweyne Farmaajo,isla markaana uu garawshiyo ka siiyey wixii dhacay ee ku saabsanaa in Ardayda Puntland loo diidey Shahaadada.
Mid kamid ah Xildhibaanada hadlay ayaa waxaa uu sheegay in Madaxweynaha uu si wanaasgan u soo dhaweeyey,isla markaana uu u sheegay in marnaba isjiid jiid siyaasadeed geli karin Shahaadada Ardayda Puntland,sidoo kale uu amray in ardayda Shahaadada la siiyo.
Waxaa kaloo uu Xildhibaanka sheegay in dadaal ay siwadajir ah u sameeyeen Madaxweyne Farmaajo,Ra’iisul Wasaare Kheye ay suurtagashay in Ardayda Dugsiga Sare ee sanadkii la soo dhaafay dhameysay la siiyey Shahaadadooda sidoo kalena sanadkaan kuwo kale heli doonaan.
Xildhibaannada ayaa waxaa ay u mahad celiyeen Madaxda ugu sareysa dowladda Soomaaliya,Madaxweynaha Puntland,Wasiirada Waxbarashada Dowladda Federaalka iyo Mamaulka Puntland,sidoo kalena ay xalin doonaan tabashooyin yar yar oo weli jira.
Caqabada ugu weyn ee khilaaf ka dhaxeeya Madaxda Dowladda Federaalka iyo Maamulka Puntland ee jirtay ayaa waxaa uu aheyd Go’aankii Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Soomaaliya Xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre uu ku sheegay in Ardayda deegaannada Puntland la siin doonin Shahaadada ilaa inay ka qeyb galaan Imtixaanka ay qaadeyso Wasaaradiisa.
Wasiirka Difaaca Iyo Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Ayaa Garonka Diyaaradaha Aadan Cadde kusoo Dhaweeyay Ciidamo Kumaandoos ah[SAWIRO]
Xildhibaan Mahad Salaad oo kamid ah Xildhibaannada Golaha Shacabka oo kasoo horjeestay in Farmaajo tago Hargeyso